PressReader - Isolezwe: 2018-04-16 - Impilo inzima kwabaseSithandimfundo
Impilo inzima kwabaseSithandimfundo
Isolezwe - 2018-04-16 - IZINDABA - ZANELE MTHETHWA
BABHEKENE nezinselelo esikoleni samabanga aphezulu eMachobeni, eNanda, osekuphele amasonto amanzi engekho, nokuphoqa ukuthi abafundi baziphathele.
Abafundi baseSithandimfundo High sebeze bakujwayela ukuziphathela izigubhu zamanzi okuphuza njengoba amanzi engabonwa esikoleni. Uma bengaziphathelanga amanzi kudingeka baphuze emathangini okukhongozelwa kuwo amanzi emvula, nawo angahlanzekile. Isolezwe livakashele kulesi sikole ngoLwesihlanu, lazibonela umpompi, okukhombisa ukuthi kade agcina ukuphuma amanzi. Abafundi abakhulume nephephandaba bathe yimpilo abayiphilayo ukuziphathela amanzi esikoleni. Abasakhumbuli nokuthi bagcine nini ukulethelwa amanzi njengoba bethi kuye kufike iloli kamasipala, nayo okuphela isonto ingafikanga.
Uthe isimo sibi nasemathoyilethi ngoba basebenzisa amabhakede ukuthela amanzi njengoba engashayeki.
Akuyona inkinga yamanzi kuphela kulesi sikole kodwa amakilasi angomahamba nendlwana futhi awenele.
Oyilungu lesigungu esilawula isikole, uNkk Bongiwe Nene, uthe bakhathazekile. Uthe isikole sakhiwa ngo-2013 kungathi amakilasi abekiwe ngawesikhashana kodwa akusenzeki lutho. Mayelana namanzi uthe: “Kuphela amasonto engekho esikoleni. Kuyenzeka kusize ikhansela licele imoto kamasipala iwalethe, nakho okungenzeki njalo. Isimo esingabekezeleleki ngoba nasemathoyilethi sekuyanuka.”
Uthishanhloko, uMnuz PS Mazibuko, uthe akafuni ukuphawula ngalolu daba. Ucele ukuthi iphephandaba lizitholele indlela yokuthola udaba ngoba akavumelekile ukuphawula.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZuluNatala uMnuz Scelo Khuzwayo uthe uma izikole zibhekene nezinselelo kumele zixhumane nomnyango. Mayelana nokwakhiwa kwesikole, uthe akanaso isibalo sezikole ezisenkingeni efanayo kodwa umnyango usohlelweni lokuzilungisa.
UMnuz Delani Phewa oyikhansela, uthe inkinga yamanzi ihlasele kuleya ndawo, okuphazamisa nesikole. Uthe ngokuzwa kwabo, kunenkinga yokungafinyeleli kahle kwamanzi ngenxa yesimo sokuma kwendawo. Uvumile ukuthi okwamanje uye acele izimoto zikamasipala ukulekelela esikoleni.
Isolezwe lithole ukuthi lilodwa ikilasi lakwaGrade 8 bese eba mabili kwaGrade 11 no-12 ngenxa yokuthi ayashoda. Kuthiwa abafundi bangu50 kuya phezulu kwamanye amakilasi.
Isithombe: THOKOZANI MBUNDA
BABHEKENE nezinselelo eziningi abafundi beSithandimfundo High eNanda, okuphela amasonto amanzi engekho kanti nesikole sinamakilasi angomahamba nendlwana, okuthiwa ayashisha